[StoryMaker] Vesna Dolinšek Sy Lam Echaml Ao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2014 0:02 GMT
Ahitana ny Foibem-pirenena Fanazarana avy any Ejipta, Tonizia, Maraoka ary Irak ihany koa ity vondrona ity, izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ireo karazana hetsika fanazarana. Ao Tonizia, fikambanana roa no nikarakra ny fampiofanana, ka anisan'izany ny Lam Echaml. Azonao vakiana eto [fr] ny tatitr'izy ireo mikasika ny fampiofanana tao Tonizia.
Afaka niresaka tamin'i Vesna Dolinšek, teratany Slovenina, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa ao amin'ny faritra izahay tao amin'ny Lasin'ny StoryMaker. Amin'ity resadresaka noraisim-peo (podcast) ity, mizara ny heviny mikasika ny Lasin'ny StoryMaker sy ny nahafahana nihaona tamin'ireo mpandrindra avy amin'ny firenen-kafa izy. Fanampin'izany, miaiky izy fa tamin'ny fanazarana tsirairay, nivoatra ny tetikasa tamin'ny fanarahana ireo torohevitra marobe sy fampiharana tsara izay nianarana nandritra ny adihevitra tamin'ny Lasy.